PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - IGrand i10 idayisa ubuthaphuthaphu
IGrand i10 idayisa ubuthaphuthaphu
Isolezwe - 2018-05-18 - EZEZIMOTO - FANELESIBONGE BENGU IMOTO: HYUNDAI GRAND I10 1.25 MANUAL GLIDE
UKUDAYISA ubuthaphuthaphu kweGrand i10 kusidweba sicace bha isithombe sokuthi liyabasebenzela iqhinga labo lokubuyekeza uhla lwezimoto zabo ezincane.
Phela le nkampani ihoxise umncanyana i-i10 yabe seyandisa umndeni weGrand i10 ngokuthi yethule izinhlobo ezinenjini ezincane ezingu-1 litre. Ukusho kwami ukuthi lokhu kubonakala sengathi kuyasebenza yingoba isibalo sokuthengwa kweGrand i10 ngenyanga eyedlule nje kukodwa sikhombisa ukuthi kuthengwe angu-1 013. Lokhu kusho ukuthi yiyona moto edayise kakhulu emndenini weHyundai kuleli.
Muva nje sithole ithuba lokuhamba isikhashana neGlide okuyiyona ephambili esitebeleni sakhona. Omzala bami akudingakalanga ukuthi bayibuke kabili ukuze kubacacele ukuthi ihlukile ngoba okokuqala nje abakuphawukle ngayo ukuthi i “sporty”.
Ngaphandle ishaya ngemibala egqamile. Ngaphambili ine-grille eyi-hexagon njengezinye izimoto zakwabo. Inechrome ngaphambili kanjalo namasondo anamarimu angu-14 inch. Ngaphakathi ivulekile futhi ibhuthi yayo ingu-256 litre kanti uma ulalise izihlalo zangemuva iba ngu-1 202.
Ibomvu ngaphakathi ecizabheni nangaphambili kwicentre console.
Esiteringini inamabhathini okulawula umsakazo, ixhuma iselula ngeBluetooth, AUX/ USB.
Ishaya ngezibuko ezishisayo kusuke inkungu futhi zigoqwa ngebhathini.
Phakathi nendawo kune-infotainment system kwi-screen esingu-7 inch lapho ukwazi ukuxhuma khona iselula ngeBluetooth nokunye.
Siyakwazi ukuveza inkombandlela kodwa kumele uthenge iSD memory card ngoR2 500. Iphinde ifike ne-aircon, ibhande uyakwazi ukulihlela ukuthi libe kuphi ehlombe. Ngaphansi kwezihlalo zangaphambili kunetray lokufihla izinto.
Kwezokuphepha ine-park distance control eyenza impilo ibe lula uma upaka ngoba ibanga umsindo uma uzoshayisa.
Lo mncanyana uthwalwa yinjini engu-1.2 litre kanti ifuqa amandla angu-64 kW netorque engu-120 Nm. Bathi isebenzisa amalitha angu-5.9 kaphethroli ngebanga lika-100 km. Kimi ibidla amalitha angu-6.1 ngihamba emgwaqeni ovulekile nasedolobheni.
Kwezokuphepha ifika nama-airbag, eyomgibeli ngaphambili neyomshayeli ne-Advanced Brake System.
Ungafunga ukuthi imoto ebizayo indlela umsindo wangaphandle omncane ngayo ngaphakathi.
Emakhoneni iyabambelela kodwa injini yayo ibuye ikukhumbuze ukuthi incane uma unyuka umqansa ngoba kumele wehlise amagiya. Kodwa emagiyeni aphansi amandla iwathumela ngokushesha.
Kunokuthenga imoto enkulu ebizayo futhi ezokugqobhoza iphakethe kuphethroli, iGrand i10 yimoto ekahle futhi efika nezinto eziningi ezenza impilo ibe lula. Inani Grand i-10 1.25 Glide manual R204 900,00 Iphuma ne-warranty yeminyaka emihlanu noma u-150 000km, powertrain warranty yeminyaka emibili noma u-50 000km, i-roadside assistance yeminyaka emihlanu noma u-150 000 ne-service plan yeminyaka emibili noma u-30 000 km Glide.